စနေသားသမီးတွေရဲ့ အားသာချက်များ… – သတင်းစုံ
စနေသားသမီးတွေဟာ များသောအားဖြင့် စိတ်သဘောထား ပြည်ဝကြတယ် စိတ်ထားကောင်းကြတယ် သင်ဟာ စနေသားသမီးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေပီ ဆိုရင် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါတော့ သူတို့ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံး မခံပါနဲ့ စနေသားသမီးတွေက သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားကြတယ်
သူ့ချစ်သူကို စိတ်ညစ်စေမယ့် အပြုအမူမျိုးကို လုပ်လေ့မရှိဘူး။ တကယ်လို့ သူ့ချစ်သူက အကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့် စိတ်ညစ်နေရင်လည်း ပျော်ရွှင်လာအောင် လုပ်ပေးတတ်ကြတယ် ဒါကလည်း သူတို့ရဲ့ ဗီဇလို ပြောရမှာပေါ့
စနေသားသမီးတွေက နည်းနည်းတော့ စိတ်ကြီးကြတယ် သူတို့ကို မဟုတ်တာ ပြောရင် မကြိုက်ကြဘူး စတာပဲဖြစ်ဖြစ် အတည်ပြောတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မကြိုက်ကြဘူး..
ဒါပေမယ့် စိတ်တိုတဲ့ အချိန်ကလည်း နာရီဝက်တောင် မကြာဘူး စနေသား သမီးတွေက အချစ်ကြီးကြတယ်. လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ပီဆိုရင် သူ့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ကို မကြည့်ဘူး ရူးရူးမူးမူး စွဲစွဲလန်းလန်း ချစ်တတ်ကြတယ်
သူ့ချစ်သူရဲ့အတိတ်က မကောင်းဘူးဆိုရင်တောင် အနာဂတ်မှာ သူ့ချစ်သူကို သေချာတိုင်ပင်ပြီး ပြုပြင်ပေးတတ်ကြတယ်.. စနေသားသမီး အများစုကတော့ ရုပ်ရည်အားဖြင့် ရုပ်ဆိုးတဲ့သူ မရှိကြဘူး. ရှိခဲ့ရင်လည်း နည်းတယ်
ရုပ်ရည် အသင့်အတင်ရှိတဲ့ သူကလည်း သူ့ရဲ့fashion နဲ့တင် ကြွေလောက်တယ်.. ရုပ်ချောပီ ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှ လိုက်မမှီဘူး. စနေသားသမီးတွေက အရပ်အားဖြင့် အရမ်းလည်း မရှည်ဘူး. အရမ်းလည်း မပုကြဘူး . အနေတော်လေးနဲ့ ချစ်စရာအရမ်းကောင်းကြတယ်
စကားပြောတဲ့ အချိန်တို့ ရယ်လိုက်တဲ့ အချိန်တွေကတော့ စနေသးသာမီးတွေရဲ့ အလှပဆုံးနဲ့ ချစ်စရာအကောင်းဆုံး အချိန်တွေပါပဲ
စနသေားသမီးတှဟော မြားသောအားဖွငျ့ စိတျသဘောထား ပွညျဝကွတယျ စိတျထားကောငျးကွတယျ သငျဟာ စနသေားသမီးနဲ့ ခဈြသူဖွဈနပေီ ဆိုရငျ ဂုဏျယူလိုကျပါတော့ သူတို့ကို လကျလှတျဆုံးရှုံး မခံပါနဲ့ စနသေားသမီးတှကေ သူ့ရဲ့ခဈြသူကိုပြျောရှငျအောငျထားကွတယျ
သူ့ခဈြသူကို စိတျညဈစမေယျ့ အပွုအမူမြိုးကို လုပျလမေ့ရှိဘူး။ တကယျလို့ သူ့ခဈြသူက အကွောငျး တဈခုခုကွောငျ့ စိတျညဈနရေငျလညျး ပြျောရှငျလာအောငျ လုပျပေးတတျကွတယျ ဒါကလညျး သူတို့ရဲ့ ဗီဇလို ပွောရမှာပေါ့
စနသေားသမီးတှကေ နညျးနညျးတော့ စိတျကွီးကွတယျ သူတို့ကို မဟုတျတာ ပွောရငျ မကွိုကျကွဘူး စတာပဲဖွဈဖွဈ အတညျပွောတာပဲ ဖွဈဖွဈ မကွိုကျကွဘူး..
ဒါပမေယျ့ စိတျတိုတဲ့ အခြိနျကလညျး နာရီဝကျတောငျ မကွာဘူး စနသေား သမီးတှကေ အခဈြကွီးကွတယျ. လူတဈယောကျကို ခဈြပီဆိုရငျ သူ့ရဲ့ပစ်စုပ်ပနျကို မကွညျ့ဘူး ရူးရူးမူးမူး စှဲစှဲလနျးလနျး ခဈြတတျကွတယျ
သူ့ခဈြသူရဲ့အတိတျက မကောငျးဘူးဆိုရငျတောငျ အနာဂတျမှာ သူ့ခဈြသူကို သခြောတိုငျပငျပွီး ပွုပွငျပေးတတျကွတယျ.. စနသေားသမီး အမြားစုကတော့ ရုပျရညျအားဖွငျ့ ရုပျဆိုးတဲ့သူ မရှိကွဘူး. ရှိခဲ့ရငျလညျး နညျးတယျ
ရုပျရညျ အသငျ့အတငျရှိတဲ့ သူကလညျး သူ့ရဲ့fashion နဲ့တငျ ကွှလေောကျတယျ.. ရုပျခြောပီ ဆိုရငျတော့ ဘယျသူမှ လိုကျမမှီဘူး. စနသေားသမီးတှကေ အရပျအားဖွငျ့ အရမျးလညျး မရှညျဘူး. အရမျးလညျး မပုကွဘူး . အနတေျောလေးနဲ့ ခဈြစရာအရမျးကောငျးကွတယျ
စကားပွောတဲ့ အခြိနျတို့ ရယျလိုကျတဲ့ အခြိနျတှကေတော့ စနသေးသာမီးတှရေဲ့ အလှပဆုံးနဲ့ ခဈြစရာအကောငျးဆုံး အခြိနျတှပေါပဲ
ဘဝမှာ မပူမပင် မကြောင့်မကြ အေးချမ်းစွာ နေနိုင်မည့် ဗုဒ္ဓယတြာ
အိမ်ထောင်ရှင် မမတွေရော၊ အိမ်ထောင်ရှင်မ လောင်းတွေရော မှတ်​သား လိုက်​နာသင့်​​သော အချက်​များ